Madaxda Galmudug oo isku khilaafay xilka qaadista Guddoomiye degmo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxda Galmudug oo isku khilaafay xilka qaadista Guddoomiye degmo
Madaxda Galmudug oo isku khilaafay xilka qaadista Guddoomiye degmo
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu xilka uga qaaday Guddoomiyihii degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud Jaamac Xayle Maxamed.
Xilka qaadista Guddoomiyihii Balanbale ayaa waxa ay abuurtay khilaaf cusub oo soo kala dhexgala Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo ku-xigeenkiisa Maxamed (Carabey).
Guddoomiyaha degmada Balanbale ee xilka laga qaaday Jaamac Xayle Maxamed oo la hadlay Radio baidoa ayaa waxa uu sheegay xilka qaadistiisa inay ka dhalatay Hay’ad degaanka ka shaqeyneysay oo shaqo joojin uu ku sameeyay.
Wuxuu sheegay caro arrintaasi ka dhalatay warqad ka soo baxday xafiiska Madaxweyne ku-xigeenka in xilka looga qaaday, balse wuxuu tilmaamay inuu la soo xiriiray Madaxweynaha Galmudug oo uu ku amray inuu sii wato shaqadiisa.
“Xuquuqdii dadweynaha oo la lun saday ilaalinteeda waxay keentay in Madaxweyne kuxigeenka uu xilka iga qaaday, isqab qabsi ka dhashay Hay’ad aan shaqada ka joojiyay ayaan xilkeyga ku waayay, Madaxweyne Xaaf ayaa ila soo xiriiray wuxuu igu amray inaan shaqada wado, aniga waxaan diyaar u ahay inaan ku shaqeeyo amarka Madaxweynaha Galmudug.” Ayuu yiri Gudoomiye Jaamac Xayle.
DHAGEYSO:- Warka Habeenimo Radio Baidoa 21-6-2021
DFS iyo Dowlad Goboleedka Hir-shabelle oo kulan ka yeeshay wax ka qabashada dhibaatooyinka fatahaadaha
Qaramada Midoobay Oo Farriin U Dirtay Itoobiya
DFS iyo Dowlad Goboleedka Hir-shabelle oo kulan ka yeeshay wax ka...
Guddiyada doorashooyinka oo lagu amray inay soo xaroodaan
Magaca qofkii ka dambeeyay dilkii Sheekh Cali Dheere Oo la Shaaciyey